Ngwá ọka Semalt na-atụ aro 5 Ngwaọrụ Google maka Ọdịnaya SEO
Nchọpụta Ngini Nchọnchọ na Ịntanetị bụ usoro nkenwere ike ịchọta ị na-eji ngwá ọrụ ma ọ bụ abụọ site na isi iyi nke a na-amaghị. Ndị hụrụ nchịkọta na metrics n'anya nwere ike ịchọrọ ọtụtụozi nke a na-enweta site na ngwaọrụ akwụ ụgwọ. N'ụzọ dị mma, Google na-enye ụfọdụ ngwaọrụ ndị nwere ike ime ka SEO dị gị mkpa. Ụfọdụnke ngwaọrụ ndị a bụ atụmatụ na usoro dị na ọrụ ọrụ nchọnchọ anyị kwa ụbọchị, ma anyị anaghị adaba na ha.
Ryan Johnson, onye isi ahịa ahịa si n'aka Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, eji nlezianya họrọ ngwá ọrụ Google iji nyere mgbasa ozi SEO na ịzụ ahịa ịntanetị aka nke ọma:
1 - ray ban wayfarer azul. Nchịkọta Google.
Ngwaọrụ a nwere ike inye aka na ịnweta nghọta na ọdịnaya kwesịrị ekwesịna-agụnye na ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu. Ọ nwere ọnụọgụgụ nke na - egosi gị ozi bara uru maka atụmatụ.
2. Njirimara njirimara Google.
Akụkụ a na-enyere gị aka ịhụ ụfọdụ ndụmọdụ ọchụchọ zuru ezu mgbe ọ bụlaị nọ n'etiti ide ihe ọ bụla n'ime ihe nchọgharị Google. Ihe ndị a sitere na nyocha ọchụchọ Google nyere gịndị ahịa ahịa ndị ọzọ na-atụ aro na ndị bu ụzọ nyochaa elu dị elu. Ime ogologo ndepụta nke ọtụtụ search engine-completedaro na - emepụta ọdịnaya nwere ike ịmepụta ọkwa weebụ.
3. Njikwa Nchọta Google.
Ngwaọrụ a nwere ike inyere gị aka nyocha ma melite ogo gị na nchọta ahụnsonaazụ nke isi okwu..Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịga "Nchịkọta Nyocha". Nchịkọta nhọrọ a dị na Dashboard Nyochama mee ka onye na-ele clicks, pịa site na ọnụego, echiche, na nchọta ọchụchọ maka ihe ruru 999 isiokwu ndị metụtaragaa na ebe nrụọrụ weebụ gị.
4. Gaa na "Google" metụtara "ngalaba."
Nkebi a nwere ike ịbụ igodo gị ọzọ maka ịga nke ọma. Mpaghara a dị naala nke ibe Google. O nwere ihe na ajụjụ n'ọdịdị elongated. Echiche ndị a nwere ike ịbụ ntinye ederede ntinye ma ọ bụutu aha gị. Dị ka ọmụmaatụ, mgbe ịchọrọ "nri nkịta", mpaghara a nwere ike ịnwe okwu ndị dị ka "nkịta nkịta kachasị mma maka ihe oriri anụ ahụ".Ime ogologo ndepụta nke echiche ndị a nwere ike ime blog nke nwere ikikere na niche ahụ.
Ọ bụrụ na mkpụrụ okwu nwere nnukwu nchọpụta dị elu na Google, enweghi ọtụtụọ dị mkpa ka ị na-emefu ego na ụdị SEO dị iche. Ndị mmadụ na-agba ọsọ ụgwọ mgbasa ozi nwere ike ịnweta nke a site na isiokwu taabụ na haNchịkọta Google Analytics. N'ebe a, mmadụ nwere ike ịchọta ajụjụ ọchụchọ ọ bụla iji tinye ego. Google AdWords nwere nyocha ọchụchọatụmatụ nke ahụ bụ otu n'ime ndị kasị mma ma bụrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ndị mmadụ na-arụ Nchọpụta Ngini Nchọpụta nwere ike ịchọ ijingwá ọrụ ma ọ bụ karịa. Ọtụtụ ngwá ọrụ na-apụta site na isi mmalite dị iche iche na-ekwe nkwa ịnapụta ma mgbe ụfọdụ ndị ojoro naghara inye aka. Otú ọ dị, Google nwere ngwaọrụ ụfọdụ onye ọ bụla na-eme SEO na ịntanetị nwere ike iji. Ụfọdụ ngwaọrụ ndị a dịdị ka ọrụ dị na engines anyị ma na-elegharakarị anya. Site na ngwaọrụ, Semalt na-atụ aro ya, o doro anya na ọtụtụỌrụ SEO dịka ọchụchọ ọchụchọ, Google na bọọlụ na crawlers nwere ike iji ngwaọrụ ndị Google nyere. N'ihi ya, mkpa makaịga maka ihe eji akpa ọchị n'enweghị ihe ọ bụla dị na ya.